Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana China » Ny rivodoza In-Fa dia mandringa ny faritr'i Shanghai any Shina
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana China • Vaovao • Theme Parks • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Sambo am-polony maro no nafindra avy amin'ny seranana be olona atsimon'i Shanghai.
Nidina an-tanety i Typhoon In-Fa. Ny oram-batravatra dia nandatsaka orana iray taona tao anatin'ny telo andro monja tamin'ny herinandro lasa teo tao amin'ny faritany afovoan'i Henan, nahafaty olona 58 farafaharatsiny.
Nofoanana ny sidina an-jatony ny seranam-piaramanidina Shanghai Pudong sy Shanghai Hongqiao noho ny fanatonan'ny taifun In-Fa. Betsaka ny sidina antenaina hofoanana amin'ny alatsinainy.
Zaridaina nakatona Shanghai sy ny distrikan'i Bund amoron-drano, faritra mpizahatany malaza. Nakatona koa i Disneyland.
Ny rivodoza In-Fa dia andrasana hitodi-doha mankany Japana ary mety hisy fiatraikany amin'ny lalao olaimpika mitohy.
Ny alahady tamin'ny 12.30 ora sy sasany alina dia nidina tany amin'ny morontsirak'i Putuo, Zhoushan, tany amin'ny faritanin'i Zhejiang Atsinanana, ny rivodoza In-Fa, nanangona rivotra hatramin'ny 38 metatra isan-tsegondra teo afovoany, araka ny fanaraha-maso nataon'ny National Meteorological Center.
200 sahady ny fampitandremana ny loza momba ny toetr'andro navoaka tany amin'ny faritanin'i Shanghai Atsinanana sy Zhejiang ary Jiangsu hatramin'ny alahady maraina. Ny 132 amin'ireo fampitandremana ireo dia navoaka hatramin'ny 8 maraina tany Zhejiang fotsiny izay hiaritra ny vokatry ny tafio-drivotra.
Mandritra izany fotoana izany, ny Ivontoeram-pirenena momba ny tontolo iainana miaro ny tontolo iainana an-dranomasina dia nanamafy ny fampitandremana mena avo roa heny momba ny fisondrotry ny oram-baratra sy ny onja any Shanghai ny alahady maraina, ary ny fampitandremana mena momba ny fisondrotry ny tafiotra any amin'ny faritr'i Hangzhou Bay ao Zhejiang.
Ny ranonorana dia norefesina 150 milimetatra ka hatramin'ny 200 milimetatra ary ny faritra sasany mahatratra 250 milimetatra ka hatramin'ny 350 milimetatra. Ny rotsak'orana ambony indrindra isan'ora dia antenaina hahatratra 40 milimetatra ka hatramin'ny 60 milimetatra miaraka amin'ny faritra sasany mahatratra 80 milimetatra.
Nanomboka omaly sabotsy ka hatramin'ny alakamisy ho avy izao dia naato ny fizarana lalamby izay antenaina ho tratran'ny rivodoza In-Fa any amin'ny faritry ny Yangtze River Delta mba hiantohana ny fiarovana ny mpandeha, hoy i Xinhua.